म झल्याँस्स भएँ !
मेचीनगर कार्यालय परिसर पुग्दा चहलपहल केही कम नै थियो । माथिल्लो तलामा मेयर साबको कोठबाहिर मेयरका स्वकीय सचिव विजय भट्टराईले दाइ नमस्कार भन्दै अभिवादन गर्नुभयो । दाइ बैठक सुरु भयो तपाईँ भित्रै जानु भन्दै विजय भाइले मलाई मेयर साबको कोठतिर जान आग्रह गर्नुभयो ।
म मेचीनगरका मेयर बिमल आचार्यलाई नमस्कारको अभिभावदन गर्दै कोठाभित्र प्रवेश गरेँ । साथमा उपमेयर मिना उप्रेती, मेचीनगरका राजनीतिक दलका प्रमुखहरु लगायत भरिभराउ थियो कोठा । म सबैलाई नमस्कार भन्दै कोठाभित्र छिरेँ ।
मभन्दा अघि नै पुगेका पत्रकार महासंघ झापाका सचिव मेरा मित्र सन्तोष आचार्यले मलाई छेउमा बस्न अनुरोध गर्नु भयो । म सन्तोषजीको छेउमा बसे । म पुग्दा मेयर साबले भर्खर बैठक सुरु गर्नुभएको रहेछ । बिमल दाइले म पसेपछि भन्नु भयो, ‘ज्ञानेन्द्र भाइ भर्खर आउनु भयो कि । मैले आज किन बोलाएको भने नि त्यो कारोना भाइरस चिनबाट कोरिया र युरोपतिर पनि सर्यो रे । हामीले पनि केही तयारी गर्नुपर्छ भनेर सल्लाहको लागि यो बैठक बोलाएको हो ।’ मेयर साबले फेरि थप्नु भयो, ‘लु अब सबैले यसका बारेमा केही सल्लाह दिनु त्यसपछि केही निर्णय गरौँला । अब तपाईँहरु आफ्ना कुरा राख्नुहोस् ।’
सुरुमा नै म अलि अचम्ममा परेँ । सधैँ जसो हाम्रा मेयर साब सुरुमा नै आफ्नो कुरा घण्टौँ लगाएर भन्ने मान्छे आज अचानक थोरै बोलेर किन बिसाउनु भयो जस्तो लागेर छेउमा सन्तोष जीलाई सोधेँ, “हैन मेयरले आज यति छिटै कसरी छोडे हौ ? कि अघिदेखि नै हो सुरु भाको ?” सन्तोषजीले मतिर फर्केर भन्नु भयो, ‘होइन आज थोरै बोले । यिनले केही गर्छन् कि क्या हो ?’ सन्तोषजीको कुरा सुनेर त म झन् छक्क परेँ । मनमनै लाग्यो हाम्रा मेयरले छोटो बोलेको बैठकको साक्षी पनि बस्न पाइयो आज ठूलै उपलब्धी भयो ।
बैठकको बिच बिचमा मेयरसाबले भन्नु हुन्थ्यो, ‘तपाईँहरु मलाई जे गरेर अगाडि बढ्न भन्नु हुन्छ, म तेसै गर्छु तर कोरोना चैं पस्न दिनु हुन्न है । बेलैमा तयारी गर्नु पर्छ ।’ मेयर साबको यस्तो कुरा सुनेर म झन् झन् अचम्ममा परिरहेको थिएँ । आफैँलाई केही समस्या नपरी हाम्रा मेयर साब खासै चलमलाउने मान्छे होइनन् । आज अलि बढी नै चिन्तित देख्छु । केही कुराको चिन्ता नलिने हाम्रा मेयरसाब आज अलि बढी नै जन उत्तरदायी भएर सुझाव मागिरहनु भएको थियो । बैठकमा छलफलपछि कोरोना आउन नदिन सीमामा कडाइ गर्ने, समस्या परिहाल्यो भने खाद्यान्नको व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै गर्ने, कोरोनाको जोखिम हुने जेष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न जनचेतना फैलाउने लगायतका निर्णय गर्दै बैठक सकियो ।
सधैँ जस्तै बैठकका अरु सहभागी बाहिर निस्केपछि सन्तोष जी, मोहन काजी र मलाई मेयर साबले, ‘एक छिन बसौँ न’ भन्नुभयो । अरु निस्किसकेका थिए । हामी तीन पत्रकार, मेयर र उपमेयर मात्रै कोठामा थियौँ । मेयर साबले भन्नुभयो,‘ तपाईँहरुको क्षेत्रले पनि अलि कोरोनाको बारेमा लेख्नु पर्यो । यसको असरका बारेमा सबैलाई थाहा दिनु पर्यो । नेपाली हो कि टेर्दैन । तेही भएर अलि थाहा दिनुपर्छ । पत्रिका, रेडियो र अनलाइनले लेख्नु पर्यो । लक्ष्मीले ( प्रेस सल्लाहाकार लक्ष्मी उप्रेती) पनि टिभीमा त गरिराकै छ । अब पत्रिका र रेडियोले पनि सूचना दिनु पर्यो नि ।’ हामीसँगको छलफलपछि कोरोना सम्बन्धी जानकारी दिन मिडिया डेक्स राख्ने कुरा पनि भयो ।
बैकठ पछि एकाएक नगरपालिका सक्रिय भयो । बैठकमा निर्णय भएका विषय कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले द्रुत गतिमा काम अगाडि बढायो ।
विश्वभरि कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र फैलिएका समाचारहरु आइरहेका थिए । छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना देखियो । नेपालमा जोखिम बढेको विज्ञहरुले बताएका समाचार छ्याप छ्याप्ती हुन थाल्यो । सिमाना जोडिएको नगरपालिका भएकाले जोखिममा परेको चर्चा सुरु भएसँगै नगरपालिकाका मेयर उपमेयर लगायत सिङ्गो नगरपालिका कोरोना नियन्त्रणमा लागेको थियो ।
लकडाउन हुने चर्चा चलिरहेको बेला नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई सङ्कटका बेला सहयोग गर्न भन्दै ५ करोडको कोरोना कोष घोषणा गर्यो । नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट विकास निर्माणको बजेट कोषमा खर्च गर्ने निर्णय गरेछ ।
नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन वार्ड बनाउने कुरा भयो । धुलाबारीको आम्दा मेची अस्पतालमा भेिन्टलेटर सहितको आइसोलेसन वार्ड बनाउने काम सुरु भयो । आम्दालाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय भयो ।
सङ्क्रमणको जोखिममा रहेकाहरुलाई राख्नका लागि नगरभित्र करिब २०० क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण भयो । यति बेलै नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो । अब झन् जोखिम बढेको हो कि भन्ने खबरहरु बाहिर आउन थाले । भारतमा दैनिक मानिसहरु मर्न थालेको खबर आइरहेका बेला पूर्वी नाकामा पहिलादेखि नै स्वास्थ्य उपचार केन्द्र नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेकै थियो । अब नाका बन्द भएपछि त्यसैलाई नगरपालिकाले ज्वरो नाप्ने फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्यो ।
लकडाउनको एक साता बितिसकेको थियो सरकारले फेरि लकडाउन बढायो । अब अति विपन्न परिवारले बिहान बेलुका छाक टार्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आउन थाल्यो । त्यस्तो अवस्थाको आँकलन गरेर मेयर बिमल आचार्यले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विपन्न परिवारलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नुभयो । वहाँले सूचनामार्फत नगरवासीलाई चिन्ता नलिन, सबैका लागि नगरपालिका रहेको र जुनसुकै अवस्थामा पनि जनताको दुःखलाई हटाउने भनेर ढुक्क पार्नुभयो ।
नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमित देखिन थाले । यस्तो अवस्थामा मेयर साब आफैँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन गरेर सिमानाको नगर भएकाले कोरोनाको परीक्षण केन्द्र नगरपालिका आफैँले सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परीक्षण सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्नु भएको खबर बाहिर आयो । गृह जिल्ला भएर पनि होला मेचीनगरका मेयरको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कोरोना परीक्षण सामग्रीसहित ३ जना तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको टोली मेचीनगरमा पठाइदिनु भयो । सामग्री सहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली मेचीनगरमा आइपुग्यो । मेचीनगर आफैँले कोरोना परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्यो । अब मेचीनगरमै कोरोनाका भाइरस परीक्षण हुने भयो । नगरका सबै नागरिकको परीक्षण गर्न सबै वडा कार्यालयमार्फत नमुना सङ्कलन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको टोली घर घर पुग्न थाल्यो । नगरवासीले मेयर साबलाई धन्यवाद भन्दै कोरोनाबाट सुरक्षित भएको महसुस गर्न थाले ।
आम्दा मेची अस्पतालमा ५ वटा भेन्टिलेटर सहित १० जनालाई राख्न सकिने आइसोलेसन वार्ड तयार भयो । अब कोरोनाबाट मेचीनगरवासी नमर्ने पक्का भयो ।
सञ्चारकर्मी भएकाले म पनि नगरपालिकाका यस्ता राम्रा कामको समाचार लेख्न नै व्यस्त हुन थालेँ । देश विदेशबाट मेचीनगरको तदारुकताको चर्चा भइरहेको थियो ।
नगरपालिकाले ५ करोड रकम राखेर सुरु गरेको कोरोना कोषमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरुले रकम जम्मा गर्न थाले । कोष १० करोडको नजिक पुगिसकेको थियो । कोरोना सम्बन्धी नियमित मिडिया ब्रिफिङ मिडिया सेन्टरले गर्थ्यो । कुनै पनि सूचना नागरिकबाट लुक्न पाउँदैनथ्यो । त्यत्तिकैमा जोखिम बढेको भन्दै नगरपालिकाले जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरु पिपिई, मास्क र पन्जा बेलायतबाट ल्याउने निर्णय गर्यो । भर्खरै भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको फोक्सटन सिटीसँग मेचीनगरका मेयर साबले कुरा गर्नुभयो । बेलायतमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएकाले तत्काल आवश्यकता अनुसारका सामग्री नआउने भए पनि केही सामग्री मेचीनगर आउने भए । थप सामग्रीका लागि नेपाल सरकारसँग नगरले कुरा गर्यो । सरकारले पनि काम गरिरहेको नगर भएर होला तत्काल स्वास्थ्य सामग्री पठायो ।
बेलायतबाट पनि ७ दिनपछि सामान आयो । अब स्वास्थ्यकर्मीहरुले ढुक्कले काम गर्ने भए । यतिले मात्रै स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त हुँदैन भनेर नगरको कार्यपालिका बैठकबाट एउटा उत्साहको निर्णय भएछ । त्यो के भने नगरभित्र काम गर्ने सबै खाले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिममा काम गरेको भन्दै नियमित पारिश्रमिक बाहेक दैनिक ३ हजार जोखिम भत्ता दिने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको समाचार लेख्न पाइयो । यो कुराले देशैभरि चर्चा पायो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिफोन नै गरेर मेयर बिमल आचार्यलाई धन्यवाद दिनु भएको समाचार बाहिर आयो ।
कोरोना विरुद्ध लड्ने उदाहरणकै रुपमा देशैभरि मेचीनगरको नाम आउन थाल्यो । अरु थुप्रै स्थानीय तहले मेचीनगरको सिको गर्न थाले । तर यता मेचीनगर त्यतिमा मात्र सीमित थिएन । जन उत्तरदायी काम एकपछि अर्को भइरहेका थिए ।
नगरका उपमेयर मिना उप्रेती पनि उत्तिकै लागिरहनु भएको थियो । लकडाउन थियो तर पनि उपप्रमुख दैनिक जसो मेचीनगरका विभिन्न ठाउँमा जाने, नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्था बुझ्ने, कोही बिरामी भेटिए तत्काल नगरपालिकामा भएको २ वटा एम्बुलेन्सलाई परिचालन गर्ने र अस्पताल पुर्याउने काम गर्नुहुन्थ्यो ।
अरुबेला साना कार्यक्रममा मेयर र उपमेयरसँगै जाने भनेर आलोचना खपेका वहाँहरु कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न फरक फरक काममा लाग्नु भएको थियो । उपमेयरले नगरभरिका महिलाहरुको एउटा सञ्चाल बनाएर गाउँ गाउँमा कसको अवस्था के छ ? त्यसको रिर्पोटिङ दैनिक रुपमा लिनु हुन्थ्यो ।
नेतृत्वले सङ्कटमा आफ्नो उपस्थिति दरिलो देखायो भनेर हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ । त्यत्तिकैमा अर्को समाचार बाहिर आयो । नगरपालिकाले मेचीनगरमा परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेछ । त्योसँगै आवश्यक सामग्री ब्यवस्थापन गर्न १० लाख रुपैयाँ नगदै उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरको रहेछ । हामी भन्न थालेका थियौँ मेचीनगरवासी हुनुमा गर्व छ । जनप्रेमी र जनताको पिर मर्का बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरु पाएका छौँ ।
कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रयणका लागि नगरपालिका आक्रामक निर्णयहरु गर्न थाल्यो । पहिलेदेखि नै ३ वटा फिभर क्लिनिक सञ्चालन गरेको मेचीनगरले कोरोना बाहेकका बिरामीको उपचारका लागि धुलाबारीको टाउन हल पासाङल्हामु स्मृति जेसीज प्रतिष्ठानलाई अस्थायी अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने भएछ । त्यहाँ अन्य विशेषज्ञ सेवालाई निरन्तरता दिने कुरा रहेछ । यो निर्णयले त झन् मेचीनगरलाई चर्चाको शिखरमा नै पुर्यायो ।
लकडाउनको समय लम्बिने भएपछि भर्खरै जन्मेका शिशुहरुलाई लगाइने नियमित खोप पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवश्यक व्यवस्थापन र सुरक्षा अपनाएर खोप सेवा सुरु भयो ।
सुत्केरी गराउनका लागि धुलाबारीको स्वास्थ्य केन्द्रलाई तोकियो । मेचीनगरका सबै गर्भवती महिलाहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र डेलिभरी गराउन धुलाबारी स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेष व्यवस्था नगरपालिकाकै सक्रियतामा गरियो ।
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरुलाई व्यवस्थापन गर्न उपप्रमुख मिना उप्रेतीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन भएको थियो । जसले सुरक्षाकर्मीहरुसँग मिलेर कालोबजारी नियन्त्रणमा राम्रो काम गरिरहेको थियो । अत्यावश्यक सामग्रीको बजार भाउ बढ्न नगरपालिकाले दिएको थिएन । किसानहरुले उत्पादन गरेको सागसब्जीदेखि दूध पनि नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेको सवारी साधनमा निश्चित स्थानसम्म पुग्न थालेका थिए ।
विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । उनीहरुको स्वास्थ्य मात्र होइन दैनिक खानपान र मनोरञ्जनका लागि पनि विशेष ब्यवस्था गरिएको थियो । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई सोध्दा भन्थे, ‘घरभन्दा त यहीँ राम्रो छ ।’ ओहो ! अरुतिर क्वारेन्टाइनबाट भागेको समाचार आउँदा हाम्रो नगरमा भने क्वारेन्टाइनमा बस्न पाऊँ भनेर निवेदन हाल्नेहरु पो देखिन थाले ।
सर्वत्र चर्चा थियो त मेचीनगर कै । देशैभरिका पत्रकारले मेचीनगरको समाचारहरु पठाइदिन अनुरोध गरिरहेका थिए । स्थानीयदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सञ्चार माध्यमहरु पनि मेचीनगरका मेयर र उपमेयरको कुरा सुनाउन तँछाडमछाड गरिरहेका थिए ।
नगरले फेरि अर्को निर्णय गर्यो । मेचीनगरवासीका लागि आवश्यक औषधी नगरले आफैँले किनेर राख्ने निर्णय गरेछ । औषधी खरिद गर्न ३ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको सुनेर दीर्घ रोगीहरुले नगरका मेयर र उपमेयरको फोटो आफ्नो पूजा कोठामा राखेर पूजा गर्न थालेको खबर बाहिर आउन थाल्यो ।
यत्तिकैमा खोइ केले हो म झल्याँस्स भएर बिउँझिएँछु । आँखा खोल्दा छेउमा श्रीमती अनिसाजी “आज यति धेरै किन सुत्नु भएको ? चिया खाने बेला भयो” भन्दै हुुनुहुँदोरैछ ।
ओहो ! यस्तो सुन्दर मेचीनगर त मैले सपनामा पो देखेको रैछु । यस्तै अवस्था विपनामा देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला नि ! भन्ने मनमा लाग्यो । अनिसाजीलाई सपना सुनाउँदा “वहाँले कोरोना भाइरसको बारेमा धेरै सोचेपछि सपनामा पनि कोरोना नै आउँछ” भनेर फट्कार्ने निश्चित नै थियो त्यही भएर सुनाइनँ ।
मेरो त्यो सपना विपनामा परिणत गर्न सकिन्छ कि मेयर र उपमेयर साब !
लेखक रेडियो साथी झापाका कार्यकारी निर्देशक हुन्। रेडियोसाथी डटकमबाट